“ဆရာဝန်လက်လျှော့တဲ့ ကင်ဆာကို မြွေပွေးဆီဖြင့် ကိုယ်တိုင်ကုခဲ့တဲ့ ဆရာတော် ဆေးနည်း” – Askstyle
“ဆရာဝန်လက်လျှော့တဲ့ ကင်ဆာကို မြွေပွေးဆီဖြင့် ကိုယ်တိုင်ကုခဲ့တဲ့ ဆရာတော် ဆေးနည်း”
လွန်​ခဲ့​သော၁၂နှစ်​ခန့်​က စစ်​ကိုင်းတိုင်း​ဒေသကြီး ကန့့်​ဘလူမြို့နယ်​က ​ဆေးဆရာ ၇၇နှစ်​အရွယ်​ ဆရာ​တော်​ကြီးတပါး
ထိုဆီးကြိတ်​ကင်​ဆာ​ဝေဒနာကိုဆရာဝန်​ကြီးများမှ ​သောက်​​ဆေးများ​ပေးခြင်း ဓာတ်​ကင်​ခြင်း​နောကိဆုံးခွဲစိတ်​ကုသ​သော်​လည်း ၆လခန့်​​ကြာ​သောအခါဆရာ​တော်​ကြီးရဲ့​ဝေဒနာမှာ ပို၍ဆိုးဝါးစွာခံစား​နေရပါသည်​။
ထိုသို့​ဝေဒနာခံစား​နေရသည်​ကို သိ​နေ​သောဆရာဝန်​ကြီးများကလူနာ​စောင့်​ဖြစ်​​သော ဆရာ​တော်​အား ​လျှောက်​ထားခဲ့ပါသည်​
အရှင်​ဘုရားတို့ရဲ့ဆရာ​တော်​ကြီးကို ရွာပြန်​ပြီး ​အေး​အေး ​ဆေး​ဆေးအနားယူဘို့ ​လျောက်​ထါးပါလို့​ပြောတဲ့အခါ တပည့်​ဖြစ်​သူဆရာ​တော်​မှ ဆရာဖြစ်​​သောဆရာ​တော်​ကြီးကို ​လျှောက်​ထားတဲ့အခါဆရာ​တော်​ကြီးမှ ပြန်​​ပြောလိုက်​တဲ့စကားမှာ မင်းတို့က ငါ့ကို​သေမယ်​ထင်​လို့လား ငါမ​သေဘူးကွ မင်းတို့ ရွာကိုမြန်​မြန်​ပြီး
ငါ့အခန်းထဲမှာ ​မြွေ​ပွေးအဆီရှိတယ်​ ပျားရည်​ရှိတယ်​ သွားယူကြဆိုပြီး ​မြွေ​ပွေးအဆီနဲ့ ပျား​လေး​ရည်​စစ်​စစ်​ဆတူ​ရောပြီးနံက်​လ္ဘက်​စားဇွန်း၁ဇွန်း ည​နေ ၁ဇွန်း​သောက်​ခဲ့ရာမှာ ယခုချိန်​ထိဆရာ​တော်​ကြီးရဲ့အသက်​မှာ ၈၉နှစ်​ အသက်​ထင်​ရှားရှိပြီးကျမ္မာ​ရေး​ကောင်း​ကောင်းမွန်​မွန်​ရှိပါသည်​။
စာ​ရေးသူကိုယ်​လဲ ဆရာ​တော်​ကြီးနဲ့ မ​တွေ့ရတာ ၁၂နှစ်​ခန့်​ကြာပြီဖြစ်​၍ 7. 8. 2017 ဝါ​ခေါင်​လပြည့်​​နေ့က ဆရာ​တော်​ကြီးရှိရာကန့်​ဘလူမြို့နယ်​ကို သွား​ရောက်​ဖူး​မျှော်​ရင်း ဆရာ​တေိာကြီးရဲ့​ဆေးနည်းများကို videoဖိုင်​နှင့်​အတူမှတ်​တမ်းတင်​ခဲ့ပါသည်​။
​ဆေးကို အချိန်​ဘယ်​ကြာကြာ​သောက်​ရမယ်​ဆိုတာ​တော့ အမိန့်​မရှိပါဆရာ​တော်​ကိုယ်​တိုင်​က ယခုအချိန်​ထိ​သောက်​​နေဆဲပါဆရာ​တော်​ရဲ့ ​ဆေးစာအုပ်​မှတ်​တမ်းမှာ​တော့ ​ကြွေဇွန်း ၇ဇွန်းသို​မဟုတ်​ စတီးဟင်းစားဇွန်း ၇ ဇွန်း​ကို တ​နေ့တဇွန်း​သောက်​ရုံဖြင့်​ကင်​ဆာမှန်​လျင်​​ပျောက်​ပါ၏
ပန့်​သကူရ​သော​မြွေ​ပွေးကို အဆီထုတ်​ပြီး နို့ဆီဗူးခွန်​ထဲထည့်​၍မီးကင်​လိုက်​ပါ အဆီများ​ပျော်​သွားပါလိမ့်​မည်​။​သွေးကင်​ဆာဆိုရင်​လဲ လူရိုးကို ဆန်​​ဆေး​ရေနှင့်​​သွေး​သောက်​အမှုန့်​ပြုစား သို့မဟုတ်​ ​မြွေ​ပွေ​သွေးလပ်​လပ်​စပ်​စပ်​ကို အိုဘာတင်းမှုန့်​နှင်​​ရောပြီး​သောက်​ ရင်​ လဲ ​ပျောက်​ပါတယ်​လို့လည်း ဆရာ​တော်​ကြီးက အမိန့်​ရှိလိုက်​ပါတယ်​။
အားလုံးကျမ္မာ ချမ်းသာစွာဖြင့်​ သာသနာပြုနိုင်​ကြပါ​စေ
Comentမှာအချို့က ကင်ဆာမှန်းသ်ိ​နေသားနဲ့ ဘာဖြစ်လို့​ဆးရုံသွားလဲ ကိုယ့်​​ဆေးကို​သာက်ပါလားလို့ ​ဝေဘန်သူ​​​​တွေအတွက် ထပ်မန်​ပြောပါရ​စေ ​​​​ဆရာ​တော်​ကြီးဟာ သူ့ရဲ့​ဝေနာကို ကငိဆာမှန်းမသိပါဘူးဆီးသွာနည်းလို့်​ ​ဆေးရုံတက်​တာပါ ​ဆေးရုံ​ရောက်​လို့ လများကြာလာတဲ့အခါဓာတ်​ကင်​ခါကြမှ ဆရာ​တော်​ဟာ သူ့ကိုယ်​သူ ကင်​စာမှန်းသိတာပါ။
စာ​ရေးသူကိုယ်​တိုင်​လဲ ကင်​ဆာ​ဝေဒနာကိုစိတိဝင်​စား​နေသူပါဆရာ​တော်​ကြီးနဲ့ ဖုန်း​ပြောရတာ အားမရလို့ ဆရာ​တော်​ ရွာကိုသွားပြီး video မှတ်​တမ်းတင်​ခဲ့တာပါ vမှတ်​တမ်းကိုိ​တော့ဆရာ​တော်​​ရေချိုးပြီးစ ​မေးချင်​လွန်​အားကြီးပြီး ဆရာ​တော်​မှာအ​ပေါ်ကိုယ်​ရုံသင်္ကန်းမပါသည့်​အတွက်​ အပြည့်​အစုံမတင်​ဖြစ်​တာခွင့်​လွတ်​ကြပါ fb ​ပေါ်တင်​ဘို့ ရည်​ရွယ်​ချက်​ကလဲ ​နောက်​မှ ​ပေါ်​ပေါက်​ခဲ့လာတာပါ ။
ဆရာ​တော်​ကိုခွင့်​​တောင်းလို့ရရင်​ ရွာနာမည်​နှင့်​တကွဆရာ​တော်​ရှင်းပြတဲ့ video ဖိုင်​မှတ်​ကို တင်​​ပေးသွားမည်​ဖြစ်​​ကြောင်း ထပ်​မံ​ပြောလိုက်​ပါရ​စေ
လှနျခဲ့သော၁၂နှဈခနျ့က စဈကိုငျးတိုငျးဒသေကွီး ကနျ့ဘလူမွို့နယျက ဆေးဆရာ ၇၇နှဈအရှယျ ဆရာတျောကွီးတပါး
ထိုဆီးကွိတျကငျဆာဝဒေနာကိုဆရာဝနျကွီးမြားမှ သောကျဆေးမြားပေးခွငျး ဓာတျကငျခွငျးနောကိဆုံးခှဲစိတျကုသသျောလညျး ၆လခနျ့ကွာသောအခါဆရာတျောကွီးရဲ့ဝဒေနာမှာ ပို၍ဆိုးဝါးစှာခံစားနရေပါသညျ။
ထိုသို့ဝဒေနာခံစားနရေသညျကို သိနသေောဆရာဝနျကွီးမြားကလူနာစောငျ့ဖွဈသော ဆရာတျောအား လြှောကျထားခဲ့ပါသညျ။
အရှငျဘုရားတို့ရဲ့ဆရာတျောကွီးကို ရှာပွနျပွီး အေးအေး ဆေးဆေးအနားယူဘို့ လြောကျထါးပါလို့ပွောတဲ့အခါ တပညျ့ဖွဈသူဆရာတျောမှ ဆရာဖွဈသောဆရာတျောကွီးကို လြှောကျထားတဲ့အခါဆရာတျောကွီးမှ ပွနျပွောလိုကျတဲ့စကားမှာ မငျးတို့က ငါ့ကိုသမေယျထငျလို့လား ငါမသဘေူးကှ မငျးတို့ ရှာကိုမွနျမွနျပွီး
ငါ့အခနျးထဲမှာ မွှပှေေးအဆီရှိတယျ ပြားရညျရှိတယျ သှားယူကွဆိုပွီး မွှပှေေးအဆီနဲ့ ပြားလေးရညျစဈစဈဆတူရောပွီးနံကျလ်ဘကျစားဇှနျး၁ဇှနျး ညနေ ၁ဇှနျးသောကျခဲ့ရာမှာ ယခုခြိနျထိဆရာတျောကွီးရဲ့အသကျမှာ ၈၉နှဈ အသကျထငျရှားရှိပွီးကမ်ြမာရေးကောငျးကောငျးမှနျမှနျရှိပါသညျ။
စာရေးသူကိုယျလဲ ဆရာတျောကွီးနဲ့ မတှရေ့တာ ၁၂နှဈခနျ့ကွာပွီဖွဈ၍ 7. 8. 2017 ဝါခေါငျလပွညျ့နကေ့ ဆရာတျောကွီးရှိရာကနျ့ဘလူမွို့နယျကို သှားရောကျဖူးမြှျောရငျး ဆရာတေိာကွီးရဲ့ဆေးနညျးမြားကို videoဖိုငျနှငျ့အတူမှတျတမျးတငျခဲ့ပါသညျ။
ဆေးကို အခြိနျဘယျကွာကွာသောကျရမယျဆိုတာတော့ အမိနျ့မရှိပါဆရာတျောကိုယျတိုငျက ယခုအခြိနျထိသောကျနဆေဲပါဆရာတျောရဲ့ ဆေးစာအုပျမှတျတမျးမှာတော့ ကွှဇှေနျး ၇ဇှနျးသိုမဟုတျ စတီးဟငျးစားဇှနျး ၇ ဇှနျးကို တနတေ့ဇှနျးသောကျရုံဖွငျ့ကငျဆာမှနျလငျြပြောကျပါ၏
ပနျ့သကူရသောမွှပှေေးကို အဆီထုတျပွီး နို့ဆီဗူးခှနျထဲထညျ့၍မီးကငျလိုကျပါ အဆီမြားပြျောသှားပါလိမျ့မညျ။သှေးကငျဆာဆိုရငျလဲ လူရိုးကို ဆနျဆေးရနှေငျ့သှေးသောကျအမှုနျ့ပွုစား သို့မဟုတျ မွှပှေသှေေးလပျလပျစပျစပျကို အိုဘာတငျးမှုနျ့နှငျရောပွီးသောကျ ရငျ လဲ ပြောကျပါတယျလို့လညျး ဆရာတျောကွီးက အမိနျ့ရှိလိုကျပါတယျ။
အားလုံးကမ်ြမာ ခမျြးသာစှာဖွငျ့ သာသနာပွုနိုငျကွပါစေ
Comentမှာအခြို့က ကငျဆာမှနျးသိနသေားနဲ့ ဘာဖွဈလို့ဆးရုံသှားလဲ ကိုယျ့ဆေးကိုသာကျပါလားလို့ ဝဘေနျသူတှအေတှကျ ထပျမနျပွောပါရစေ ဆရာတျောကွီးဟာ သူ့ရဲ့ဝနောကို ကငိဆာမှနျးမသိပါဘူးဆီးသှာနညျးလိျု့ ဆေးရုံတကျတာပါ ဆေးရုံရောကျလို့ လမြားကွာလာတဲ့အခါဓာတျကငျခါကွမှ ဆရာတျောဟာ သူ့ကိုယျသူ ကငျစာမှနျးသိတာပါ။
စာရေးသူကိုယျတိုငျလဲ ကငျဆာဝဒေနာကိုစိတိဝငျစားနသေူပါဆရာတျောကွီးနဲ့ ဖုနျးပွောရတာ အားမရလို့ ဆရာတျော ရှာကိုသှားပွီး video မှတျတမျးတငျခဲ့တာပါ vမှတျတမျးကိုတော့ဆရာတျောရခြေိုးပွီးစ မေးခငျြလှနျအားကွီးပွီး ဆရာတျောမှာအပျေါကိုယျရုံသင်ျကနျးမပါသညျ့အတှကျ အပွညျ့အစုံမတငျဖွဈတာခှငျ့လှတျကွပါ fb ပျေါတငျဘို့ ရညျရှယျခကျြကလဲ နောကျမှ ပျေါပေါကျခဲ့လာတာပါ ။
ဆရာတျောကိုခှငျ့တောငျးလို့ရရငျ ရှာနာမညျနှငျ့တကှဆရာတျောရှငျးပွတဲ့ video ဖိုငျမှတျကို တငျပေးသှားမညျဖွဈကွောငျး ထပျမံပွောလိုကျပါရစေ